Romantic Rustico entliziyweni Dolomites - I-Airbnb
Romantic Rustico entliziyweni Dolomites
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguEmma
UNksz Emma uya kukuvuyela ukukwamkela kule nto intle, ilungiswe ngokupheleleyo i-1800's Rustico, ixhotyiswe ngazo zonke izinto ezithuthuzelayo, ezifikelelekayo ngemoto. Kumgangatho ophantsi, kunye nekhitshi elikhulu-igumbi lokuhlala, igumbi lokulala eliphindwe kabini elinebhedi ene-canopy kunye nebhedi enye, kunye nebhedi yesofa ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela elineshawa. Ngaphandle kukho i-terrace enkulu ene-barbecue, itafile yegadi, isitulo kunye ne-ambrela apho unokuphumla khona. Indawo yokupaka egciniweyo.
Indlu yelizwe ekhethekileyo enekhitshi leplanga elinazo zonke izixhobo zale mihla, igumbi lokulala elikhulu elineepowusta ezine ibhedi ephindwe kabini kunye nebhedi enye kunye negumbi lokuhlambela langoku elineshawa.
Ithala elikhulu elinetafile, izitulo zedesika kunye nebarbecue apho unokuchitha khona iintsuku ezimnandi ekuphumleni ngokupheleleyo phantsi kwelanga leDolomites.
I-cottage ijikelezwe ngokupheleleyo yindalo, ine-lawn enkulu, engenazo iimoto ezikufutshane, ilungele abantwana.
Iyakonwabela indawo ebalaseleyo yokufikelela kwezona ndawo zinomtsalane kubakhenkethi, yi-1 km kuphela ukusuka kumbindi wePadola kwaye ukusuka kwi-"3 Zinnen" ski lifts, iindlela zokuhamba ekhephuni kunye nomsesane wokutyibiliza welizwe, iikhilomitha ezili-15 ukusuka eVal Pusteria kunye nobuninzi bayo. Ukutyibilika kwe-ski, iikhilomitha ezingama-40 ukusuka eCortina kunye neencopho ezintathu zeLavaredo kunye neenqaba ezintlanu, iikhilomitha ezili-15 ukusuka eAuronzo, iikhilomitha ezingama-30 ukusuka eSappada, iikhilomitha ezingama-30 ukusuka eCadore kwaye ngeyure nje ungaba eOstriya.
5.0 · Izimvo eziyi-134
I-cottage ijikelezwe yindalo, indawo efanelekileyo yokwenza izinto ezifana nokuhamba, ukukha amakhowa, ukukhwela ihashe, inja yesileyi, ukuwela ilizwe kunye ne-skiing ezantsi, ukukhwela i-snowshoeing, i-thematic trails, nge-ferratas, i-MTB okanye iindlela zebhayisekile, ezifana neendlela ezidumileyo. San Candido-Lienz uhambo.
E-Padola kukho iinkundla ze-tennis, i-gym yokukhwela, i-skating, ibala lebhola, ibala lokudlala. Iya kuba yiholide egcwele i-adventures kunye nokuphumla, kufuneka ubhukishe!
Ndihlala kumgangatho wokuqala we-cottage ukuze ndifumaneke kuyo nayiphi na intandabuzo okanye imfuno, kodwa kunye nokucebisa iindwendwe kwimisebenzi eyahlukeneyo ekufuneka yenziwe. Mna nomyeni wam silumke kakhulu kodwa sisoloko sifumaneka kwiindwendwe zethu.
Ndihlala kumgangatho wokuqala we-cottage ukuze ndifumaneke kuyo nayiphi na intandabuzo okanye imfuno, kodwa kunye nokucebisa iindwendwe kwimisebenzi eyahlukeneyo ekufuneka yenziwe.…